1 Talohan' ny fanjanahan-tany
4 Ny fitondran' i Mobutu Sese Seko
4.1.1 Fanonganana an’ i Kasa-Vubu sy fitondrana jadon' i Mobutu
Fiitaran' ny fanjaka-mpanjakaHanova
Ny faharavan'ny Empira LondaHanova
Fahazoan’ i Stanley fahefana feno tao CongoHanova
Nisy ny fanjakana, isan’ izany i Frantsa sy i Pôrtogaly, izay nilaza ho manana tany tao amin’ io faritra io, ka ny fivoriam-be natao tao Berlin tamin’ ny volana Febroary 1885 no nanaiky ny maha masi-mandidy ny mpanjaka Léopold II amin’ ny ampahany be amin’ ny lemaka tondrahan’i Congo sy ny faritra ivoahan’ ity ony ity any amin’ ny ranomasina, ka nahatoga an’ i Angôla pôrtogey hizara roa.
Fananan’ i BelzikaHanova
Tsy fifanarahan’ ny mpitaky fahaleovan-tenaHanova
Ny fisaraham-bazan’ i KatangaHanova
Nitombo ny korontana rehefa nanambara ny fahaleovan-tenan’ ny faritanin’ i Katanga i Moïse Tshombé izay notohanan’ ny Union minière ka nangataka ny fanampian’ny miaramila belza, tamin’ ny 11 Jolay 1960.
Tamin’ ny 5 Septambra 1960 dia nanambara ny fanesorany an’ i Patrice Lumumba tsy ho piraiminisitra ny filoha Joseph Kasa-Vubu. Tamin’ io fotoana io ihany koa no nanonganan’ i Patrice Lumumba an’ i Joseph Kasavubu. Ny tafika kôngôley notarihin’ i Mobutu Sese Seko, izay mpomba an’ i Joseph Kasavubu, no naka ny governemanta. Tamin’ ny 29 Septambra 1960 dia namindra ny fahefany tamin’ ny governemanta vonjimaika notarihin’ i Mobutu Sese Seko i Joseph Kasa-Vubu. Nosamborina sy nogadraina i Patrice Lumumba, avy eo novonoina tamin’ ny 17 Janoary 1961, tany amin’ ny faritanin’ i Katanga, izay namindrana ny famonjana azy.
Fitsaharan’ ny fisaraham-bazan’ i KatangaHanova
Tamin’ ny volana Janoary 1961 dia nanangana governemanta vonjimaika vaovao i Joseph Kasa-Vubu, ka nisy mpikambana avy ao amin’ ny Antenimiera taloha izany governemanta izany (isan’ izay i Joseph Ileo izay notendrena ho piraiminisitra). Ireo mpomba an’ i Patrice Lumumba koa dia nanao toraka izany tany Léopoldville (ka i Gisega no piraiminisitra).
Tamin’ ny 21 Febroary 1961 dia nanome alalana ny Firenena Mikambana hampiasa hery ny Filankevi-pilaminana, mba hialana amin’ ny ady an-trano ao Kôngô. Tamin’ ny faran’ ny taona dia namely ny tafik’ i Tshombé ny tafiky ny Firenena Mikambana sy ny tafika kôngôley. Nanao fifampiraharahana hampitsaharana ny ady eo amin’ ny tafika misatro-manga sy ny tafika katangey i Dag Hammarskjöld sekretera jeneralin’ ny Firenena Mikambana, nefa maty tamin’ ny lozam-piaramanidina izy.
Tamin’ ny Desambra 1962 dia voafehin’ ny tafiky ny Firenena Mikambana i Elisabethville (Lubumbashi ankehitriny). Nandositra sy nialokaloka tany Kolwezi i Tshombé. Nitolo-batana izy tamin’ ny 15 Janoary 1963 ary nahazo famelan-keloka miaraka amin’ ireo namany.
Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an' i LumumbaHanova
Fanonganana an’ i Kasa-Vubu sy fitondrana jadon' i MobutuHanova
Taorian' ny tsy fahombiazan’ ny governementa iraisana dia nandray ny fitondrana i Mobutu Sese Seko tamin’ ny faran’ ny taona 1965, rehefa avy nanongana an’ i Kasa-Vubu, ka nanambara ny tenany ho filohan’ ny Repoblika. Tamin’ ny taona 1966 dia nanangana governemanta jadona, izay ananan’ ny filoham-pirenena fahefana betsaka, izy sady antoko tokana no nekeny hisy, dia ny Mouvement populaire de la révolution (MPR). Izany fitondrana izany (sy ny safidy momba ny antoko tokana) dia nohamafisiny tamin’ ny fampadaniana lalàm-panorenana vaovao tamin’ ny taona 1967. Navadika ho orinasam-pirenena ireo orinasa vahiny mpitrandraka harena an-kibon’ ny tany.
Nanamafy ny maha filoha azy tamin’ ny fifidianana i MobutuHanova
Niova anarana ho Zaira i KôngôHanova
I Léopoldville novana anarana ho Kinshasa;
I Stanleyville novana anarana ho Kisangani;Kisangani
I Elisabethville novana anLubumbashi;ubumbashi
I Jadotville novana hoLikasi;na Likasi
I Albertville novana hoKalemie;a Kalemie
I Luluabourg novana hoKananga.a Kananga
Fitontogan’ ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsianaHanova
Fihozongozonan’ ny fitondran’ i MobutuHanova
Tamin’ ny taona 1990 dia niseho matetika ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana nanoherana ny kolikoly izay nanjaka teo amin’ ny fitondrana, nanoherana koa ny fandrobana ny harem-pirenena nataon’ ny filohan’ ny Repoblika sy ny mpiara-dia aminy, nanoherana ny fanitsakitsahana ny zon' olombelona mbamin’ ny demôkrasia. Rehefa noteren’ ny firenena tandrefana hampanjaka ny demôkrasia i Mobutu dia nanaiky hampanao fihaonambem-pirenena, sady nanaiky ny maha ara-dalàna ny fijoroan’ ny antoko pôlitika maro. Tsy nanaiky ny hanovana ny lalàm-panorenana vaovao araka ny tapaka nandritra ny fihaonambem-pirenena anefa i Mobutu. Hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1994, rehefa nanaisotra ny piraiminisitra, izay mpanohitra, sy nampiato ny fihaonambem-pirenena i Mobutu dia nipoaka ny savorovoro sy ny fihetsiketseham-panoherana. Nofaiziny mafy aamin' ny alalan' ny antoko-miaramila mpiambina ny filoham-pirenena izany.
Nahazo vahana ny mpiokoHanova
Fandaminana tsy nahomby nataon’ ny samy AfrikanaHanova
Ny fitondran' i Laurent-Désiré KabilaHanova
Tompon’ antoka tamin' ny fandripahana ny HotoHanova
Fikomian' ny Totsy baniamolengeHanova
Fikomian’ ny Totsy baniamolenge mpanampy an’ i Kabila talohaHanova
Fidirana an-tsehatry ny firenena afrikanaHanova
Tsy nety nalamina ny mpanohitra sy ny mpitondraHanova
Ny fitondran' i Joseph KabilaHanova
Fiakaran' i Joseph Kabila teo amin' ny fitondranaHanova
Nisy namono i Laurent-Désiré KabilaHanova
Fahavononana ara-pôlitika sy amin’ ny asa fampandrosoanaHanova
Fananganana ny governemantan’ ny fampihavanam-pirenenaHanova
Fahalanian’ i Joseph KabilaHanova
Ny fitondran' i Félix TshisekediHanova
Fiakaran' i Félix Tshisekedi teo amin’' ny fitondranHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27_ny_Repoblika_Demôkratikan%27_i_Kôngô&oldid=1045425"
Dernière modification le 25 Mey 2022, à 04:23
Voaova farany tamin'ny 25 Mey 2022 amin'ny 04:23 ity pejy ity.